- မိမိရဲ့စိတ်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်တဲ့ စိတ်အလုပ်မှာ အဖော်ပြုပေးထားသော စိတ်ကတော့ နှစ်ခုရှိတယ်။ အသိနဲ့ သတိစိတ်ပဲ။
- အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်းတွေ ဖြစ်နေရတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရှိလို့ဆိုတာကို သိတဲ့စိတ်အသိလား? ခန္ဓာငါးပါးရဲ့အကြောင်းကို အသေအချာ သဘောပေါက်တဲ့ စိတ်အသိလား? ဒုက္ခကို ဒုက္ခမှန်းသိတဲ့ စိတ်အသိလား? အာရုံခြောက်ပါးကြောင့် ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ တဏှာ၊ အစွဲတွေ ဆင့်ပွားဖြစ်ကုန်တာကို သိတဲ့ စိတ်အသိလား? ကံ ကံရဲ့အကျိုး၊ ကံဆိုတာ အလုပ်၊ စေတနာကောင်းရင် ကံကောင်းမယ်။ စေတနာ မကောင်းရင် ကံညံ့မယ်ဆိုတော့ စေတနာစေတသိက်ရဲ့ လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့ စိတ်ကို မိမိရဲ့ကောင်းမှုကျင့်စဉ် ကျင့်နိုင်အောင် စည်းရုံးထားနိုင်တဲ့ စိတ်အသိလား? ဘယ်လိုစိတ်အသိက ဘယ်လောက်တန်ဖိုး ရှိနေတာကို အသင် စဉ်းစားပြီး အဖြေထုတ်ကြည့်ပါ။
- ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာဟာ အဆိုးရွားဆုံး အခြေအနေထိ ရောက်သွားတဲ့ စိတ်ရဲ့သဘော။ ဘယ်လိုမှ ပြန်ပြင်လို့မရအောင် ပျက်စီးသွားပြီလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ (ဒီလို အခြေအနေမျိုး မဖြစ်အောင် စတင် ပျက်စီးနေပြီဆိုလာတည်းက သတိထားမိအောင် ဂရုစိုက်ပြီး အချိန်မီ ပြုပြင်ပေးနိုင်ရင် သုံးမရအောင် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အဆင့်ကို မရောက်နိုင်ဘူး။)
- တန်ဖိုးရှိတဲ့ စိတ်စေတသိက်တွေကို စနစ်တကျ အသုံးမချတတ်လို့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေနဲ့အတူ အလဟဿ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ စိတ်အဓိပ္ပာယ်။
- အလုပ်တစ်ခုကို စတင်လုပ်တုန်းက ဟုတ်တိပတ်တိ လုပ်တော့မလိုလိုနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လုပ်ချင်သလိုလို၊ မလုပ်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာပြီး လုံးဝ စိတ်မပါတော့တဲ့ စိတ်အမျိုးအစား။
- မိမိစိတ်ကို ကောက်ကွေးမထားရင် ဘယ်လိုပဲချိတ်ချိတ် မငြိဘူး။ ကွေးထားလိုက်ရင်သာ ငြိသွားမှာ။ ငြိတယ်ဆိုရင် မကောင်းတော့ဘူး ဆိုတော့ ဘယ်သူကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း၊ မိမိစိတ်ကို ကောင်းအောင် ရှင်းထားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်သဘော။
- ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စိတ်အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်အခြေအနေ။
- သာမန်အဆင့်ထက် ပိုလွန်းပြီး အပြင်းအထန် တုံ့ပြန်မှုတွေ လွန်လွန်ကဲကဲ ပြုလုပ်နေတဲ့ စိတ်အဆင့်။
- မိမိထက်ပိုပြီး ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့သူကို ပြည့်စုံသွားအောင် မိမိဘက်က အနစ်နာခံပြီး ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- အလုပ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် မလုပ်တတ်ပေမယ့် လူအထင်ကြီးတာကို လိုချင်လို့ လုပ်တတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး၊ ညာဝါး ဖြီးဖြန်းလုပ်ပြနေတဲ့ စိတ်အနေအထား။
- မိမိယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆတစ်ခုအပေါ်မှာ ဘာ့ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်သူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြောင်းလဲမှုမရှိ၊ ဖောက်ပြန်မှုမရှိ၊ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ စိတ်အဆင့်။